Motadata: Ngwọta ITOps jikọrọ ọnụ
Ihe omume ọ bụla bara uru -
Wetulata oge site na ịdọ aka ná ntị n'ezie, bọọdụ dashboard, yana nyocha nke igwe-ịmụta maka ụdị telemetry atọ niile - ndekọ, metrik na akara.
Nyochaa ma jikwaa IT niile
Site n'ịbawanye mgbagwoju anya nke netwọkụ dị iche iche nke oge a, ọ ghọwo ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ dị iche iche itinye ego na nyiwe arụmọrụ IT siri ike.
Nweta nghọta siri ike iji wepụta nsonaazụ azụmaahịa
Megharịa usoro azụmahịa n'ofe nzukọ a
Megharịa ma jiri ya gbasaa Ngwakọta Native
Site na nchikota obodo 200+ nke usoro nleba anya, igwe ojii, na API nke ndị ọzọ, na-emezi mkpokọta na ngbanwe ngwa ngwa. Jiri metric na log ngwa nyochaa ihe niile ozugbo site na isi mmalite ọ bụla - Metrics, Network Flow and Logs
Dozie Kasiri gị ike
Ihe ịma aka ọrụ IT
Jikwaa nke ọma olu data na-eto eto. Kwatuo silos data, nwee echiche nke ihe omume na ozugbo, wee mee ka nnyefe ọrụ ọgbara ọhụrụ dịkwuo elu.
Mee ọgaranya &
Wepụ mkpọtụ, nweta nghọta
Nweta nghọta miri emi site na iwepụta data bara uru na mkpọtụ site na nhazi mmemme gụnyere, metrik, data ndabere, data log, wdg.
Gbaa mbọ hụ na e nwere ngwa na ọrụ ndị dị oke mkpa iji zute SLA site n'ịrụsi ọrụ ike na-edozi nsogbu na ijikwa akpaaka.
Ọnụ ọgụgụ na-enweghị oke
Hazie mmemme nleba anya gị, site na nkwado maka ijeri metrik, yana ngwa gị yana ịkwado ọrụ IT.
Tụkwasara obi & Masịrị site n'aka The World's Leading Enterprises